FITAKIANA FAMOAHANA VOAROHIROHY :: Navotsotra ireo olona dimy nahatonga ny fahamaizan'ny tranona lehibena distrika • AoRaha
FITAKIANA FAMOAHANA VOAROHIROHY Navotsotra ireo olona dimy nahatonga ny fahamaizan’ny tranona lehibena distrika
Nilefitra tamin’ny teri­vaimanta nataon’ireo andian’olona, tany Port-Bergé, ireo tompon’andrai­kitra any an-toerana. Araka ny loharanom-baovao azo dia navotsotra avokoa ireo olona dimy naiditra am-ponja vonjimaika noho ny fitakian’ireo andian’olona nandoro ny tranon’ny lehiben’ny distrika tamin’ny zoma lasa teo.
Voarohirohy ho nanao fitrandrahana faritra voaaro ireo olona dimy ireo herinandro lasa izay ary naiditra
am-ponja. Nitaky ny hamoahana azy ireo anefa ireo andian’olona avy any amin’ny kaominina misy azy any ambanivohitry Port-Bergé, tamin’io zoma io ka tsy nahazo fahafaham-po. Niitatra ny raharaha rehefa hariva ny andro satria nisy ireo mpanao politika voalaza fa nampirisika ireo andian’ olona ka niafara tamin’ny fandorana ny trano fonenan’ny lehiben’ny distrika sy ny tompon’ andraikitry ny Bongolava Maitso. Ity farany no voalaza fa mitantana io faritra voaaro io.
“Mbola mafana aloha ny fo amin’izao fa tsy midika izany fa mijanona eo ny raha­raha. Miandry ny toe-draha­raha milamina tsara izahay dia tsy maintsy hiroso amin’ny famotorana satria fantatra avokoa ireo olona nahava­non-doza tamin’ny zoma ireo”, hoy ny tompon’andraiki-panjakana iray any Port-Bergé, omaly, raha nanonta­niana izay mety ho tohin’iny raharaha iny.
Fandrobana tao an-tsena Tovolahy maty voadaroka fa voatondro ho mpangalatra
Fikarakarana faty eny amin’ny HJRA Tsy namoaka didy fampiatoana ny fizahana razana ny PAC
Fiaraha-miasa amin’ny Frantsa Hitsidika toerana maro eto Iarivo i Jean-Yves Le Drian
Fahafatesana vehivavy tany Ambilobe Nakarina aty an-drenivohitra ilay lehilahy voasambotra
FOTODRAFITRASA AO AMBOHIPIHAONANA :: Ankohonana dimy alina hahazo herinaratra
HETSIKA ARA-TOEKARENA ::: Nitombo isa ireo mpandray anjara tamin’ny Foaran’ny indostria